13 Atụmatụ na iji ime ka ọtụtụ n'ime MPEG Streamclip
Ị na-eche echiche nke a ụzọ dezie gị vidiyo na kọmputa gị? Nye ya na-agbalị na MPEG streamclip nke bụ a bụghị nanị na a oké video nchịkọta akụkọ kamakwa a jụụ ọkpụkpọ na convertor maka ma Macintosh na windows kọmputa. MPEG streamclip-enyere onye ọrụ na-egwu vidio ndị na-abụghị nanị na MPEG faịlụ kamakwa enuba ha. Cheta na ị chọrọ ibudata a software nke bụ free na a dakọtara QuickTime version Na nke a na gị PC jide n'aka na ị nwere ike ugbu dezie, ewepụtụ, bee sonyere fim nakwa dị ka nbudata na fim. Ị nwere ike na-eche otú na-aga banyere ya ma na nke a ga-atụle otú ka n'ụzọ zuru ezu jirichaa MPEG iyi clip malite na isi anyị kwuru na mbụ!
NDỤMỌDỤ 1: Dezie Videos
Ka na-amalite na isi atụmatụ nke edezi Obere vidiyo. Ị kwesịrị ị na-eme ka ọtụtụ ndị software na okwu nke shortening a ogologo nke a nyere video. Ya mere, na-enwe gị video ugbua na ebudatara MPEG streamclip ma na windo ma ọ bụ Mac, na-aga Dezie, si n'ebe ị ga-ahụ a oge atụmatụ na-enye gị otu nhọrọ na etiti oge nke chọrọ ogologo nke gị video. Ọ tụrụ na sekọnd. Ya mere ka a ị ga-pịa m isi. Ugbu a, ihe na-ekpe bụ n'ihi na ị na-ewepụtụ gị video: ime otú ị na-aga menu na pịa Dezie mgbe ahụ ewepụtụ. E ị na-aga, gị ugbu a mere!
NDỤMỌDỤ 2: idetuo na mado videos
Ọ bụ uru na kwa na-agbalị si na idetuo na mado atụmatụ a software. Gaa Dezie NchNhr; na dobe ala menu pịa Họrọ Na ịmata ihe na-clip na Họrọ maka ndị na-clip ka-kpaliri.
Mgbe nke ahụ gasịrị, pịa Copy na-egosiputa na cursor ebe ị chọrọ ka Tapawa clip, mgbe ahụ, Tapawa Clip.
NDỤMỌDỤ 3: mpikota onu Videos
Onye na-akpali banyere software bụ na ị nwere ike mpikota onu gị videos. Ihe i nwere ime bụ, ịdọrọ clip ka MPEG streamclip ọkpụkpọ. Gaa Njikwa menu na pịa Export Your Video.
Na enyemaka nke bupu mkparịta ụka na-egosi na ị ga-enwe ike ịhọrọ a chọrọ usoro. Ka ịgbakwunye na ị nwere ike ikpebi mmepụta size nke gị faịlụ site na-ahọpụta bit ọnụego. Dị nnọọ Tinye uru na igbe dị na nri gị n'okpuru ihe mmịfe na họrọ kpọmkwem etiti ọnụego nke gị clip.
NDỤMỌDỤ 4: n'Ubi videos
Ị nwere ike belata ma ọ bụ weghara a obere akụkụ nke video. MPEG streamclip akuku atụmatụ abịa kemfe welie nke a. The cropping ngwá ọrụ na-enyere gị iji họrọ òkè nke clip ị chọrọ ịnọgide na. N'ihi ya na ị nwere na-eri nri na digits na igbe gburugburu ya ka i kpochapụ achọghị akụkụ.
NDỤMỌDỤ 5: Gbanwee ihie na iche nke Videos
Ị maara na i nwere ike ịgbanwe ihie olu na iche nke gị mkpachị? Mgbe ị pịa na ukpụhọde Icon, ya dobe ala menu ga-enye gị a ọtụtụ ọrụ dị ka ìhè, saturation, iche na olu. Dị egwu tinyere ịhụ ihe suut gị mma.
NDỤMỌDỤ 6: bugharia na tụgharịa Videos
Na MPEG strreamclip ị na-elele window, ị nwere ike bugharia na tụgharịa gị videos. Ịdọrọ foto gị na window na ewepụtụ ya, mgbe ahụ gaa Njikwa, si n'ebe ị nwere ike mbupụ gị videos ka formats dị ka AVI, FLV, mpg dị nnọọ banyere ole na ole. Tupu na ịpị adiana>-eme ka fim ma ọ bụ video echeta ịhọrọ degrees na ị chọrọ bugharia gị video. Mgbe n'usoro n'usoro na-echeta na-azọpụta ma nyegharịa faịlụ.
NDỤMỌDỤ 7: Resize mkpachị
Ọzọkwa, ị pụrụ resize mkpachị na iji software. Mbupụ foto na File menu, ebe ị ga-enwe ike ịhọrọ etiti nke clip ma hụ na ị na-adịghị tamper na àgwà nke clip. Ya mere ị pụrụ ịhụchalụ ka ego na na.
NDỤMỌDỤ 8: mbugharị Your Videos
Zooming bụ atụmatụ na a ga-adịghị ekpe unmentioned, mgbe nbudata a video ma eleghị anya MPEG video ị nwere ike mbugharị ya. Na window aga File, họrọ faịlụ> oghe nke mere na i nwere ike imeghe faịlụ ndị ahọrọ. Ahụ na-aga n'ihu na na ịzọpụta faịlụ na nyegharịa ọhụrụ clip. Mgbe a na-ekwu bụ mgbe i nwere ike mbugharị site na video.
NDỤMỌDỤ 9: Iji MPEG streamclip ịgbakwunye ndepụta okwu
Mgbe ụfọdụ ị na-eche otú ndepụta okwu nwere ike kwukwara na a video. Nke a nwere ike mfe a ga-enweta na iji MPEG streamclip sobtaitel. Ọ bụ amanyere bụ iwu ike a ederede faịlụ ebe ị ga-pịnyere okwu, ma ọ bụrụ na ọ bụ a DVD ị nwere ka ọ gbaa ya, wee wụnye ffmpegx na PC gị. Mgbe ahụ, ị ​​na-agagharị na faịlụ gị ọkụ na imeghe ya. Site na ịpị nzacha ị ga-VOB ndepụta okwu. Mgbe ahụ Ibu Ibu subs na subtext faịlụ gị meghere, ị nwere ike igwu ka ịhụchalụ ọnọdụ ndị ndepụta okwu. Mgbe na-eme otú ị pịa encode. Nke a ga-erughị 20 nkeji maka a ọkọlọtọ AVI usoro.
NDỤMỌDỤ 10: Download na tọghata Youtube videos na software
Ọ bụ na unu na-mara na Youtube videos nakwa dị ka Google videos nwere ike ibudata site na nke a software? Na File menu, pịa Open URL.
Mgbe ahụ idetuo peeji URL na ị chọrọ ibudata na pịa OK. Usoro a bụ mfe na ngwa ngwa. Dị iche iche na nsụgharị nke software dị ị nwere ike ibudata ihe HD video.
Na YouTube videos i nwere ike tọghata video iche iche formats dị na software. Ọ bụrụ na ị chọrọ iji tọghata mkpa ka ị mara na video na format họọrọ. Ihe atụ ya na a ga-eji na iPods- mkpa ka ị na-ahọrọ dakọtara format nke bụ MPEG. Ị nwere ike ịpụ na mbupụ videos ka QuickTime .Alongside Ị nwere ike mbupụ audio formats.
NDỤMỌDỤ 11: tọghata ndị ọzọ Videos na MPEG Streamclip
Ọ bụghị naanị na ị pụrụ tọghata gị tube videos kamakwa fim. Na File menu click on Open DVD ma ọ bụ Open faịlụ, mgbe ahụ, ị ​​nwere ike tọghata video ka FLC, MKV, AVCHD, WMV ma ọ bụ AVI. Dị ka na ezughị ya enyere gị aka ịgbanwe video PID, Audio PID na mode.
VSL format videos nwekwara ike converted. Gaa Njikwa menu, mgbe ahụ, na-emeghe gị video on streamclip site na-adọkpụpụta ya, mgbe ahụ nnọọ pịa na akụkụ ga-converted. Site nanị exporting MPEG-4 bụ ihe niile dị mkpa iji wuchaa akakabarede.
NDỤMỌDỤ 12: Dezie Audio n'Ụzọ
Ọzọ na-akpali akpali mma bụ ya ike na dezie ọdịyo egwu, na Dezie menu ị nwere ike pịa on Nhichapụ nke ga-emecha kpochapụ track. Ya mere, ọ bụ ihe amamihe dị ike a ndabere maka faịlụ n'ihu na-eji ha na MPEG streamclip.
NDỤMỌDỤ 13: Tinye codecs na Plugins welie arụmọrụ
Cheta na ị nwekwara ike ime ka ọtụtụ n'ime nke a dị ike software site na-agbakwụnye dakọtara codecs na nkwụnye ins. Ị ga-mkpa tinye perian software ọ bụrụ na ị chọrọ igwu .FLV faịlụ ka ihe atụ. All kwuru na mere, ị maara ugbu a otú ị pụrụ ime ka ọtụtụ n'ime a software.
MPEG Streamclip Input na mmepụta Format
Beginners 'Guide to MPEG Streamclip
MPEG StreamClip si edezi Atụmatụ
Video Onye kere maka Facebook: Olee ka a Video maka Facebook
Olee otú Download na tọghata URL Video ka MP4
Olee otú iji tọghata DVR ka MP4
> Resource> Video> 13 Atụmatụ ime ka ọtụtụ nke MPEG Streamclip